ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ inverted Bucket Air Trap မှအရည်အသွေးမြင့် inverted Bucket Air Trap ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ကျနော်တို့အထူးပြုတဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများမှာ inverted Bucket Air Trapကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းများ .Most ရေခြားမြေခြားတင်ပို့ရောင်းချကြသည်ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုထောက်ပံ့သောငါတို့အဘို့အ customers.Moreover ပိုပြီးအရည်အသွေး, အထောက်အပံ့နှင့်ငွေကြေးတတ်နိုင်မှုနှင့်အတူထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်စေကြပါပြီကြိုဆိုဖြစ်ကြပြီးကျနော်တို့အစမ်းအမိန့်ထုတ်ကုန်သောသင်တို့၌စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမယ်လို့ယုံကြည် ကျနော်တို့ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုင်းများအတွက် market.We ကြိုဆိုကြောင်းအမိန့်အဘို့အတန်ဖိုးကိုအဖြစ်အသေးစားနှင့်အကြီးစားဖောက်သည်ထံမှနှစ်ဖွဲ့ / OEM အမိန့်ရှိပါတယ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကြသည်။
ထူးမြတ်သောအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်ပိုမိုအသုံးပြုသူများမှ overseas.For နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အခမဲ့ခံစားရသည်။
ပုံစံ - CAST IRON No. 981A SERIES
DSC CAST Iron Inverted BUCKET AIR ထောင်ချောက်များ
●ထိုင်ခုံနှင့်အဆို့ရှင် Inverted BUCKET အမျိုးအစား AIR ထောင်ချောက်၏ထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်,တစ်မိနစ်အဖွင့်လှစ်,ပထမ ဦး ဆုံးအနည်းငယ်သောလေထု၏ပမာဏ,ရေနံနှင့်ရေ,ထိုအခါပိတ်,ထပ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စက်ဘီး.
●လည်ပတ်မှုကာလအတွင်း PRIM လိုအပ်သည်.လေထဲကိုရောက်တဲ့အခါ.ရေထိုင်ခုံနှင့်ပိုက်ကွန်ထောင်အဆို့မပါဘဲမပိတ်နိုင်ပါ.အသစ်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ BUCKET ထောင်ချောက်ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်,ဒါမှမဟုတ်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိပိတ်ပြီးနောက်.
●အကောက်ခွန် ၃၀ ကီလိုဂရမ်ထက်ကျော်လွန်သောဖိအားပေးမှုအတွက်အကောက်ခွန်အိတ်ထည့် BUCKET အမျိုးအစားလေကြောင်းထောင်ချောက်တစ်ခုလုပ်သည်/CM2 လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်,စက်ရုံဆွေးနွေးတိုင်ပင်.
DSC အမျိုးအစားအမှတ်.981A~686FA စီးရီး
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/inverted-bucket-air-trap-1.html